Archives nokuti Law & More
Kurambana kwepasi rose
Yaimbove tsika kuroora munhu werudzi rwumwe chete kana wekwavakabva. Mazuva ano, michato pakati pevanhu vemarudzi akasiyana siyana iri kuwanda. Nehurombo, 40% yemichato muNetherlands inoguma pakurambana. Izvi zvinoshanda sei kana mumwe achigara kune imwe nyika asiri […]
Kuva nemubereki chirongwa mune nyaya yekurambana
Kana iwe uine vana vadiki uye iwe ukarambana, zvibvumirano zvinofanirwa kuitwa nezve vana. Zvibvumirano zvekudyidzana zvichaiswa pasi zvakanyorwa muchibvumirano. Chibvumirano ichi chinozivikanwa sehurongwa hwekurera vana. Urongwa hwekurera vabereki hwakanakisa hwaro hwekuwana kurambana kwakanaka. Ndi […]
Kurwa kurambana chiitiko chisingafadzi chinosanganisira manzwiro mazhinji. Munguva ino zvakakosha kuti zvinhu zvinoverengeka zvakarongedzwa nemazvo nekudaro zvakakosha kufonera rubatsiro rwakakodzera. Nehurombo, zvinowanzoitika mukuita kuti avo vemberi-vavakaroorana navo vatadze […]
Wakatyora mutemo wekorona uye wakabhadhariswa faindi here? Zvino, kusvika nguva pfupi yadarika, iwe wakamhanya nenjodzi yekuve nerekhodi rematsotsi. Iyo corona faindi inoramba ichiripo, asi hapachina katsamba pachinyorwa chematsotsi. Nei zvinyorwa zvematsotsi zvave munzwa wakadai kune […]
Kudzingwa ndeimwe yematanho anosvika kure mumutemo webasa une mhedzisiro inosvika kune mushandi. Ndokusaka iwe semushandirwi, kusiyana nemushandi, usingakwanise kungoti zvisiye. Iwe une chinangwa chekudzinga mushandi wako here? Pakadaro, unofanirwa kufunga nezve mamwe mamiriro […]
Iwo musimboti unoshanda muDutch muripo wemutemo: munhu wese anotakura zvake kukuvara. Mune zvimwe zviitiko, hapana kana munhu ane mhosva. Funga, semuenzaniso, nezvekukuvara kunokonzerwa nechimvuramabwe. Kukuvara kwako kwakakonzerwa nemumwe munhu here? Pakadaro, zvinogona kungoita kutsiva kukanganisa kana […]
Mamiriro ezvinhu mumamiriro ekubatanidza mhuri
Kana mutorwa awana gwaro rekugara, anopiwawo kodzero yekubatana kwemhuri. Kubatana kwemhuri kunoreva kuti nhengo dzemhuri dzeanobata chinzvimbo vanobvumidzwa kuuya kuNetherlands. Chinyorwa 8 chebumbiro reEuropean Convention on Human Rights chinopa kodzero kune […]
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kumiswa kwechibvumirano chebasa, kana kusiya basa, chinhu chinodiwa. Izvi zvinogona kunge zviri izvo kana mapato ese achifunga nezvekurega basa uye vogumisa chibvumirano chekumisa mune izvi. Iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve kugumiswa nekubvumirana pamwe uye chibvumirano chekumisa pane yedu saiti: Kudzinga.site. Pamusoro pe, […]
Zvinotarisirwa nemushandirwi nemushandi zvinoenderana neMutemo Wekushanda
Chero basa raunoita, iro musimboti muNetherlands nderekuti munhu wese anofanirwa kushanda zvakachengeteka uye zvine hutano. Chiono chinosimudzira chirevo ichi ndechekuti basa harifanire kutungamira kurwara panyama kana nepfungwa uye kwete zvachose kurufu semhedzisiro. Musimboti uyu […]
Munhu ane chikwereti asisakwanise kubhadhara zvikwereti zvake zvisati zvaitika ane mashoma sarudzo. Anokwanisa kunyorera kubhuroka kwake kana kunyorera kuti apinde muchirongwa chepamutemo chekugadzirisa chikwereti. Mukweretesi anogona zvakare kunyorera kubhuroka kwemunhu ane chikwereti. Pamberi pemunhu ane chikwereti anogona […]
Mhosva inozivikanwa ye2019 : Iyo yeMexico inodzora muviri CRT (Consejo Regulador de Tequila) yanga yatanga kumhan'ara kuna Heineken iyo yakataura izwi rekuti Tequila pamabhodhoro ayo eDesperados. Desperados ndeyeboka rakasarudzwa raHeineken renyika dzepasi rose uye zvinoenderana neanobika doro, i "tequila yakavhenganiswa doro". Desperados […]
Vashandi pamwe nevashandirwi vanogona kusangana nekudzingwa munzira dzakasiyana siyana. Unosarudza iwe kana kwete? Uye pasi pemamiriro api ezvinhu? Imwe yedzakanyanya nzira kudzingwa nekukasira. Ndozvazviri here? Ipapo chibvumirano chebasa pakati pemushandi nemushandirwi chinopera ipapo ipapo. […]